မိုက်တယ်.. သင်္ကြန်ရေအကြိုလောင်းရမယ်...ကိုဖိုးချမ်းကို.. ကွိကွိ
စိုးထက် - Soe Htet ! 1:35 am
ဧပရယ် မှာ ဖူး ကြတာကို ဘာညာက တစ်ကယ် ထင်နေတယ် ... ကွိ ကွိ ... သူ့လို ရီတာ :P
WaiHin 2:41 am
ဇနိ 3:08 am
ကိုစိုးထက် ကွိကွိ ရောက်တော့ ရီလိုက်မိသေးတယ်။
တော်သေးတယ် မန္တလေးကို လုံဒုံကို ရွှေ့မလို့ဆေးဖော်တာ အောင်သွားပြီလို့ မပြောလို့။
MieNge 3:27 am
luu nauk kyi.......
wut lae mae`.... :)
but soooooooooo pitty boi :P
Myo Kyaw Htun 5:46 am
Posted in April 1st, 2008 ?
MELODYMAUNG 6:39 am
အယ် အစုတ်ပလုတ်တုတ် နာက အဟုတ်မှတ်ပီး ဆီဗုံးမှာပါ အော်ထားမိပီ ပြန်ဖျက်ပေး ချက်ချာကြီး
တော်ပီ မတ်စိပါ တင်ထားလိုက်ပီ
ဧပရယ်ဖူးမှာ ဘယ်သူ့မှ အရူးမလုပ်တော့ပါ.. အရူးလာလုပ်ခြင်းလဲ သည်းခံပါ..
ဘိုင်ဒဝေး ဒီမှာ သင်္ကြန်မိုးတွေရွာနေပီ
CMS 2:25 am
ဘာညာ > ရေအကြောင်းပြောရင် ချမ်းလွန်းလို့ပါ နဂိုကတည်းကမှ ဒီမှာ အေးရတဲ့ကြားထဲ :P
ကိုစိုးထက် > ဓာတ်ကူးသွားတာထင်တယ် ဟိဟိ
waihin > ဒါလည်း ဖြေသိမ်မှု့တစ်မျိုးပေါ့ကွာ ဟုတ်ဘူးလား :)
ဇနိ > လွန်လွန်ကြူးကြူးဖွဲ့ဆိုမှုတွေ ဖြစ်ကုန်မှာစိုးလို့ပါ ;)
mienge >akhu ma thi tar lar . haha
MKH > ဟုတ်ပ ဒီနေ့ အမှတ်တရအနေနဲ့ တင်လိုက်တာ .. ဘာလဲ နောက်နေတာလား ကောင်လေးက :P
မမီ > ဟဟ ပို့စ်တင်ရကျိုးနပ်သွားပြီကွ
ShweMyat 5:08 am
ဟိ ဟိ မမီနဲ့ မဘာညာ ခံလိုက်ရပီ ...
မီးငယ် 10:46 pm
အဟုတ်အောက်မေ့လို့ ဖတ်နေတာ... :(
လူဆိုး...ဟွန်း.. ဟိဟိ..ပေါနေတာ ကိုကြီးဖိုးချမ်းက..